I-Wiko iveza ii-smartphones zayo ezintsha kwi-MWC, iinkwenkwezi zijonga i-2 kunye ne-2 Pro Pro Iindaba zeGajethi
Ifemu yaseFrance iyaqhubeka ukongeza kwaye kulo nyaka Kusungulwe izixhobo ezitsha ezisi-8 kumsitho weBarcelona, Inkomfa Yehlabathi Ehambayo. Kwezi zixhobo zisi-8 siza kugxila ngqo kwiimodeli zokugqibela, kuba ngenxa yexabiso elisinika lona, ​​singatsho ukuba lukhetho abanokulwenza ukuba siceba ukuthenga iWiko.
Olu luhlu lunemodeli ezimbini ezikhoyo, el I-Wiko View 2 kunye ne-View 2 Pro. Umahluko ophambili kuzo ubonakalisiwe kwinkcazo kunye nakwabaqalayo siza kuthi bakwikhamera, iprosesa kunye nokugcinwa. Ngayiphi na imeko, kungcono ukubona ngokuthe ngqo izinto abanazo kwaye ungenayo nganye yezi modeli zintsha, ngoko ke masifike kuyo.
1 Ukucaciswa kweWiko View 2
2 Ukufumaneka kunye nexabiso
Ukucaciswa kweWiko View 2
Zombini iimodeli zine I-6 ″ HD + isibonisi kwi-1.440 x 720 ene-19: 9 factor ratio, kwaye zombini iimodeli zinamashiya, isiqithi okanye inotshi encinci kwiscreen. Oku kufihla ikhamera yangaphambili apho sinomahluko ngokuxhomekeka kwimodeli esiyithengayo, kwimeko yeMbono 2 yi-13 MP kwaye kwi-View 2 Pro yi-16 MP, zombini zanele iifowuni zevidiyo, iiselfie kunye abanye.
Ukuba sijonga kumqhubekekisi ukuba ezi modeli zintsha zeWiko zonyuka, kufuneka sitsho ukuba zivela kuthotho lweQualcomm Snapdragon kwaye kukho umahluko phakathi kwezi zimbini: umbono 2 une-Snapdragon 435 kwi-1,4GHz kunye nePro ye-Snapdragon 450 kwi-1,8GHz. Kweli candelo banokuba banobulungisa, kodwa ke, ixabiso abanalo lenza ukuba kuqondakale ukuba ayizizo processor zokugqibela zesizukulwana.
Zonke ezinye iinkcukacha Zizo zilandelayo:
32GB kunye ne-microSD 64GB kunye ne-microSD
3.000 mAh kunye nokutshaja ngokukhawuleza 3.500 mAh kunye nokutshaja ngokukhawuleza
I-LTE, i-WiFi, i-NFC, iFingerprint Reader, iBluetooth I-LTE, i-WiFi, i-NFC, iFingerprint Reader, iBluetooth
I-Android 8.0 Oreo I-Android 8.0 Oreo
Izixhobo zisebenza kakuhle kakhulu kwaye zinazo Zombini i-Android 8.0 Oreo phantse inyulu, eqinisekileyo ukuba abasebenzisi bayakuxabisa okoko ulungelelwaniso lokwenza ngokwezifiso lincinci, ukuba alukho.
Ngale ndlela, into abasixelela yona ukusuka eWiko kukuba bazakufumaneka ngenyanga ka-Epreli nangayo Ixabiso ngama-199 euros kwi-View 2 kunye ne-299 euro ye-View 2 Pro. Ngaba uyasiqonda ngoku ukuba kutheni sithe ngexabiso elifanelekileyo lemali?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Wiko iveza ii-smartphones zayo ezintsha kwi-MWC, iinkwenkwezi zijonga i-2 kunye ne-View 2 Pro